Natural Emerald 7.19ct na Pyrite inclusions, si Colombia
Emerald bụ nkume dị elu na ọtụtụ beryl (Be3Al2 (SiO3) 6) na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. N'ihi na nchọta chromium na mgbe ụfọdụ vanadium.
Beryl nwere ike nke 7.5 gaa na 8 na Mohs. Otutu emeralds juputara na ihe ndi ozo, ya mere, ha siri ike (iguzogide mgbochi) enweghi ike. Ọ bụ cyclosilicate.
Okwu "emerald" na-ewepụtara (via Old French: esmeraude na Middle English: emeraude), site rụrụ arụ Latin: esmaralda / esmaraldus, a variant nke Latin smaragdus, nke malitere na Ancient Greek: σμάραγδος (smaragdos; "green mkpuru").
A na-eji edozi emeralds, dị ka agba nkume ọ bụla, na-eji ihe anọ bụ isi mee ihe anọ Cs of Connoisseurship: Color, also Clarity, Cut and Carat weight. Tupu narị afọ 20, ndị na-ere ahịa na-eji mmiri eme ihe, dị ka "nnukwu mmiri", iji gosipụta njikọta àgwà abụọ: agba na nghọta. Dị ka ọ dị, na nchịkọta nke nkume dị egwu, agba bụ ihe kachasị mkpa. Otú ọ dị, na nhazi nke emeralds, njirimara bụ nke abụọ. Nkume mara mma aghaghi inwe nani udi ocha di ocha dika akowara n'okpuru ebe a, kamakwa inwe oke nkpa ka oburu ihe di elu.
N'ime iri afọ nke iri abụọ, Chivor m gafere n'aka ọtụtụ ụlọ ọrụ. Tinyere onye nwe Germany, ọtụtụ ndị na-etinye ego na ndị Canada na ndị Canada "Chivor Emerald". Anyị chọpụtara na emerald nke akụkọ ihe mere eme na 1920. Aha emerald a bu "Patricia" n'ekele nwa nwanyi nke onye oru m. Ahịa ire ere a na-emezi emerald (632 grams) bụ ọnụ ọgụgụ dị ala nke $ 126.4
Ememe 7.19ct Emerald XII na nke Pyrite, site n'aka Chivor, Colombia
Chivor bụ obodo na obodo dị na Eastern Boyacá Province, akụkụ nke ngalaba ndị Colombia nke Boyacá. Ọnọdụ okpomọkụ nke obodo dị na ndagwurugwu Tenza bụ 18 Celsius C (64 F F). Chivor dị na 215 kilomita (134 mi) si isi obodo Tunja. Chivor bụ onye a ma ama maka emerald
Emerald siri ike si Madagascar
zụta emeralds na ụlọ ahịa anyị
Sytraty hydrothermal Emerald